हतार हतारमा यसकारण छवीसँग डिर्भोस गरेकी शिल्पा यि भारतीय विबाहित निर्देशकसँग प्रेममा रहिछन् – Gazabkonews
हतार हतारमा यसकारण छवीसँग डिर्भोस गरेकी शिल्पा यि भारतीय विबाहित निर्देशकसँग प्रेममा रहिछन्, ति निर्देशककी पत्नि रुँ दै मिडियामा आएपछि भारतीय मिडियामा छाइन् शिल्पा, अर्काको घ र बार बि गा रेर आखिर के गर्न खोजेकी शिल्पाले ? यि पुरुषसँग तेस्रो विबाह गर्नै लाग्दा शिल्पाका यस्ता अहिलेसम्म बाहिर नआएका भित्री पो ल हरु खुले, के छा ड्लिन् त छविकी जेठी पत्निले यत्तिकै शिल्पालाई ? अब के हुन्छ हेर्नुहोस् शिल्पा र छवीका वकिलले गरे नयाँ खु ला सा, भारतीय मिडियामा पनि निर्देशकले शिल्पाका कारण उनकी पत्नि रुँदै हिँडेका समाचारहरु भा इरल बनेका छन् । हेर्नुहोस् यो एक्स क्लुसिभ भिडियो रि र्पोट । भिडियोले छवि, शिल्पा र शिल्पाका भारतीय प्रेमी र उनकी पत्निका बारेमा सारा र ह स्य खोलेको छ
नेपाली कलाकारहरुका बारेमा चलेका मु .द्दा यतिबेला विचाराधिन अवस्थामा छन् । नायक भुवक केसी वि.रु.द्ध नायीका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले दिएको उजुरी, खलनायक राजेन्द्र खड्गी विरुद्ध मानव बेचविखन विरुद्धको मु. द्दा वि.चाराधिन छन् । नायीका साम्राज्ञीले भुवनलाई लक.डाउनका समयमा आफुलाई दु ब्र्य वहा र गरेको भन्दै स्टाटस लेखेपछि त्यसको विवाद चलचित्र र कलाकारसंग सम्बन्धित संस्थाहरुमा पुग्यो । अहिले भुवन केसी आफ्नो मानहानी भएको भन्दै अदालतमा पुगेका छन् । त्यो विषयमा पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।
ख.ल ना यक राजेन्द्र ख.ड्कीलाई लागेको मानव बेचविखनको मु .द्दा पनि टुं गो लागेको छैन । ड.कुमेन्ट्री बनाउन विदेशमा केही मानिस लगेर उतै छोडेको भन्ने आरोप उनलाई लागेको हो । केही समय अघि अर्की नायीका शिल्पा पोखरेलले उनका श्रीमान छवि ओझाका विषयमा दिएको अभिब्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो । धेरैले उनको जस्तै क्या रीकेचर गरेर टिकटक भिडियो बनाए । त्यो विषय पनि कि नारा लागेको छैन । शिल्पा उनको चौथो श्रीमती हुन् । उनीहरुबीच ४ वटा मु .द्दा च.लिरहेका छन् । अधिवक्ता स्वागत नेपालले सो विषय हेरिरहेका छन् । सो मु .द्दा को व कालत स्वागत नेपालले गरेका छन् ।
यो विषयमा मिलेमतोको प्रयास गरेको अ धिवक्ता स्वागत नेपालले बताएका छन् । एपि वान टेलिभिजनमा प्रसारित भिडियो सामग्रीमा सो कुराको खु ला सा गरेका हुन् । शिल्पाका श्रीमान छविले आफु मिडियामा आउन नचाहेको बताएका छन् । मिडियामा आउन नचाहेका कारण संचारकर्मीको फोन आफुले न उठाएको उनले बताएका छन् । उनले आफुलाई न्या यलय प्रति विश्वास लागेको बताएका छन् । उनले मिलापत्र भइरहेको भन्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा यस्तो ज वा फ दिएका छन् ।